Amathuba emisebenzi emva kokwenza i-CCNA Certification | IYO
Amathuba emisebenzi emva kokwenza iCCNA Certification
I-Cisco CCNA isatifiketi yinto ehamba phambili ekuqhubeni umsebenzi osebenzayo kunye nokuma phakathi kweempawu ezisemgangathweni zoshishino lwe-Networking. I-Cisco Systems yintsikelelo phakathi kwabavelisi abaninzi abavakasayo, abaqalayo, nabarhwebi be-Networking Routers kunye noTshintsho. I-Cisco isebenzela i-'Interactive Human 'ebanzi - isalathisi kunye nesakhiwo sokuqala seMeltimedia esichaphazela abantu emhlabeni jikelele ngokukhetha iincwadi zeeVidiyo kunye neVidiyo. I-CCNA isatifiketi yinto ehamba phambili ekubhekiseleleni kwimpilo kunye nale nqaku. I-CCNA yinto ehamba phambili ekuhambeni kwexesha elide kunye nezinga elikhulu lokukhuthaza ukhetho lokuzikhethela olwenzela ikusasa lakho.
I-Cisco inikeza uqeqesho lwe-CCNA kunye neziqinisekiso eziya kukukunceda ukuba uqhubele phambili kwindlela yokuqeqeshwa yakho. Iiprogram zokuqinisekisa iinkonzo zeCisco zinika amalungiselelo kumazinga amahlanu -
Iinjineli zemafu, iinduna zefu kunye nesakhelo sakha: I-Associate level inikeza i-CCNA okanye i-Cisco Certified Network Associate ukuba ilungele. I-CCNA Cloud iluncedo kubanjineli befu, abaphathi befu kunye neenjineli zesikhokelo. Eli lungiselelo liyindlela emangalisayo yokujongana nokufumana iinjongo eziphambili kunye nokuqikelela indlela yokunyamekela ngempumelelo ukuphuhliswa kwintsebenziswano. Izifundo ezicetywayo zibandakanya ukuqonda i-Cisco Cloud Fundaments kunye nokubonisa iCisco Cloud Administration ezifumaneka kwilayibrari ye-elektroniki yeCisco.
Imisebenzi yoKhuseleko: CCNA Cyber ​​Ops kukulungele ukuvula iingcango ezivulekileyo ezahlukeneyo kuwe. Ukugcina ukhuseleko lwekhompyutha ngumsebenzi ozama ukuqeqeshwa kwe-CCNA Cyber ​​Ops. Emva kwalokhu kuvunywa, ungaqalisa umsebenzi wakho ngokugxila kwimisebenzi yokukhusela. Ngokusebenzisa i-CCNA Data Centre, i-CISCO inikeza ucwangciso olubanzi oluya kwenza ukuba ugcine ixesha kunye nemali kwiimbono, umzekelo, umncedisi uhlakulele isakhelo, ukusebenzisa nokugcina. Kuzo ezibandakanyiweyo kwizithili apho ii-IT kunye nezikhokelo ezikhoyo zidibana, i-CCNA Industrial isona sigqibo esona sigqibo. Kubaluleke kakhulu ekuhlanganiseni, ukulawula ukulawula, kunye nokusebenza kweoli kunye negesi.
Ukhuseleko: Olunye uqeqesho lweCCNA olubonelelwa yiCISCO yiCCNA Security. Isakhelo esinokukwazi ukukhusela i-CCNA siyakwazi ukuphuhlisa isakhiwo sokhuseleko, sibone ingozi kunye nokulungelelanisa ilungiselelo leengozi. Uya kuba nekhono ekuphuhlisweni esetyenziswe njengenxalenye yesakhiwo sezokhuseleko. Iingcali nge-CCNA Routing, i-Cisco CCENT kunye noTshintsho, okanye nayiphi na isatifikethi se-CCIE zilungele umyalelo-mali ukuba zicwangcise ukuqinisekiswa kwe-CCNA Security.
Ukungenazintambo: I-CCNA ukuqinisekiswa nge-Wireless idibanisa umba weengcali ezingenasikhonkco eziqinisekileyo ukuba kuqinisekiswe ukuba ukuqhubela phambili esetyenziselwa ishishini kwihlabathi eligqibeleleyo lichazwe, lihlolwe kwaye ngokubanzi konke okujikelezayo. Olu hlobo loqeqesho luyakwandisa ulwazi lwakho kunye neziphumo kwi-LAN ukusekwa, ukuhlola nokuhlola. Uya kuba nekhono lokwenza inethiwekhi edelele ekujoliswe kuyo ukulungiselela kunye nantoni ye-intanethi yokufikelela. Olu bhengezo luneenkqubela phambili.
Izatifikethi, umzekelo, i-CCNA inika ukuphakanyiswa okuhloniphekileyo ekusebenzeni kwakho kwaye yenza ube ngumdlalo ozayo. Iziqinisekiso kwiCACNA ziyakwenza ukuba uguqulwe ube yinto ebalulekileyo yokubambisana kwakho.
Bona kwakho :
Kutheni iikhampani zifuna abaPhuhli bezoKhuseleko kunye nee-Admins CEH eziqinisekisiweyo?